.By Nuuradiin Koosaar | Somaliland Today
← Maalinta Xuska Shuhaadadu Waa Maalin Ku Qaalya Jiritaanka Somaliland Qofkasta Oo Aaminsan Jiritaanka Qaranimada Somaliland
Ebola Iyo Cabsida Dadweynaha Maraykanku Ka Qabaan →
Ugu horayn waxaa mahad iska leh ilahay subxan watacaala inagu beeray mandaqad dagan oo kulayl iyo qabow xun midna lahayna , inagana dhigay umad islaam ah oo nabad galiyo taam ah ku haysata mandaqadii ilahay ku abuuray , waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa websiteka caanka ah ee hadhwanaag oo mar walba umada u soo gudibiya xaqaayiq dhab ah iyo warar lagu kalsoonyahay . shacbiga reer soomalilandna si wayn uugu tageera inay fikirkooda si xor ah ku cabiraan .
Mahadnaqa kadib waxaa runtii xil ka saaranyahay muwaadinka dhabta ee jecel nabada iyo hurumarka dalkiisa inuu ka mahad celiyo , madaxda qaranka ee gacanta ku haysa masiirka umada isla markaana maamusha hay’adaha qaranka ee kala gadisan cidii xilkii
loo igmaday siday tahay u gudatay , ka aan gudana loogu baraarujiyo sidii uu ugudan lahaa wajibaadka qaran ee saran umadiisana uugu adeegi laha qaab cadaalad iyo sinaan ku jirto.
Hadaba waxaa horaantii bishan aynu soo dhafnay ee sept.2014 , ay gudidad dhaqaalah ganacsiga iyo hurumarinta barlamaanka somaliland oo ay ka mid ahaayeeneen(Mohamed H.Mohamoud Cumer Xashi, Ali Mohamed Hassan, Saleebaan Cawad Cali, Mohamed Xajiyusuf Ahmed, Mohamed jamac Cali bulqaas, Mohamed Jamac warfaa, Ali Obsiye Diiriye, Naasir X. Cali Shire ) .
ayhawlo shaqo uugu kicitimeen kormeer ay ku samaynayaan hayadaha dhaqaalaha somaliland , waxay booqdeen costumka kalabaydh, customka wajaale, hamaha shidaalka ee barbara, customka dakada barbar, wasaarada maliyada , banka dhexe iyo hay’ado madax banaan . ujeedada socdaalkooduna uu ahaa in ay wajibaadkooda dastuuriga ah ka gutaan hawlaha qaranka oo ay hay adahaa aynu soo sheegnay iyo kuwa kale oo ku jira misaaniyad sanadeedaka 2014 oo dhamaa $212 million ay kormeer ku sameeyaan si ay u helaan ( accountability transparent ah ) ogaadana dakhliga dhabta ah ee wadanka soo galaa iyo inuu ubaxay sidii ku haboonayd , waxanay hay’ad kasta oo ay booqdeenba falanqayn kadib kaga tageen nidaam wada shaqayn iyo talo soo jeedin.
Runti wadankeenu waa wadan aad u yar hadana dakhliga wadanka soo galaa waa mid aan yarayn marka loo eego tiradda dadkeena iyo baahidooda.
Miisaaniyadu waa halka laga garan karo dhaqaalah wadanka iyo isbadalkiisa, iyo siyaasadu guud ee xukuumadu dhaqaalaha ka leedahay. Misaniyad sanadeedka 2014 oo ah sanadka aynu ku jirno waxa uu gaadhay 1,276,033,716000 SLSHoo u dhiganta dollar ahaan $212,672,286.
Oo la odhankaro waaa aduunka inooga soo xarooda , customyada dalka , dakada barbara , hamaha shidaalka , lacagta ka soo xaroota ganacsiga somaliland sida xoolaha nocyadooda kala gadisan, beeyada iyo fooxa, cashuuraha dawladaha hoose ee gobolada iyo dagmooyinka .
hadaba waxaa is waydiin mudan hadii dalkhliyga intaa leeg wadanka uu soo g galo dadka inta shaqaysana 1% anay gaadhaynin dhaliyartiina ay camal la aan uga tahriibayso wadankoodi , daryeelkii cafimaadka , ilaalinta quality aqoonta , ilaalintii adeegyada bulshada sida laydhka iyo biyuhuba ay aad inooga litaan halkee ayaay dakhliga guud ee qaranka soo galaa ku baxaa.
Hadaba waxaan odhankaraa sababaha gudida dhaqalaha barlamaanka oo ah golihii shacabigan matalayaay ay ku go aan sadeen in ay dabagal dheeraada iyo war bixino ka keenaan hayadaha kala duwan ee dhaqalaha dalku waa taas. si ay monitoring uugu sameeyaan in dakhliga dawlada soo galaa uu ku baxo sidii loogu talo galay iyo inuu musuq maasuq kubaxo .
Marlabad iyo mar sadedexaadba waxaan mahadnaq balaadhan u celinayaa gudida mujisay geesinimada iyo hawlqabadka dastuuriga ah ee ay umada uugu matalayaan waxaanay runtii xaq u leeyihiin odoraska misaniyad sanadeed kasta oo wasaradu maliyadu soo gudbiso wax ka badalkiisa iyo talo bixintiisa , waxanaan usoo jeedinayaa in ay dadaalka halkaas ka sii wadaan shacbigii kalsoonidooda ku soo dortayna ugu adeegaan si xilkasnimo lah .
Guntii iyo gaba gabadii waxaynu nahay qaran jira oo leh dhamaan haykalkii dawlad nimo iyo dastuur qaran oo diinta islaamku saldhig u tahay ilalana ay u yihiin cidamada qalabka sida ee dalkeena. Sidaa daraadeed waxaan dhamaan hayadaha dawlada ama hanoqoto golayaasha qaranka , dawladaha hoose iyo dawlada sare oo ah fulintii inagoo gacmaha is haysana qarankeena ku hogamina horumarin iyo cadaalad oo aynu ka horu marinaa daneheena gaarka ah danka guud iyo masiirka umada . sidoo kale waxaan xukuumad talada haysa u soo jeedinayaa in ay dhawraan wajibaadkooda qaran si wadaniyad ku dheehantayna oo aan qabyaalad iyo kala sooc midna lahayn wadankooda iyo shacbigii soo dortay uugu adeegana.
Waxaa kale oo aan xukuumad u soo jeedinaynaa in ay horumiyaan dhaqaalaha guud ee wadanka iyagoo dhirigalinaaya ganacsiga suuqa xorta ah ( free market competition ) kabayaasha dhaqaalaha , horumarinkta ilaha dhaqaalaha wadanka ( economic resources) dhiri galinta malgashiga dibada , ilaalinta hantida guud ee qaranka iyadoo sifican laga shaqaysinaayo hay ada ladagalanka musuq masuqa ( somaliland ant corruption commission).
Gacmo wada jira iyo quluub israacsan baybnu qaranimo ku hanaan karnaa .
Waa qalinkii: Nuradin Kosar Omer